Home / बिचित्र संसार (page 3)
एजेन्सीः दराजले किचिएका जुम्ल्याहा भाइलाई दुई बर्षीय बालकले बचाएका छन् । सिटिटिभी फुटेजमा देखिएको भिडियो हेर्दा जो कसैको मन झस्किन्छ । भिडियोमा दुई बर्षीया कलिला बालकलाई ठूलो तराजले किचेको प्रष्ट देखिन्छ । करिब दुई मिनेट ठूलो दराजले किचिएका बालक सकुसल उठेको देख्दा सबैको मन प्रफुल्ल हुन्छ ।
अमेरिकाको यो घटना यत्तिबेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । जुम्ल्याहा बालकका पिता रिकी सोफले सिसिटीभी फुटेज फेसबुकमा राखेपछि भिडियो भाइरल भएको हो ।
बालकका पिताले फेसबुकमा भनेका छन्, ‘यसलाई पोस्ट गर्न चाहिरहेको थिइन । तर, सचेतनाका लागि मात्र नभएर असाधारण भएको पुष्टि गर्नु उचित ठाने। दाइभाइको आत्मीय सम्बन्धका लागि हामी अनुगृहित छौँ । तपाईं घरका फर्निचर राम्ररी सेट भएका छन् भन्ने निश्चित हुनुहोस् ।’
हामीकहाँ बिहेमा बेहुलीले सारी चोलो वा ब्लाउज लगाउँछन् भने बेहुलाले कोट पाइन्ट वा दौरा सुरुवाल । बिहेमा गाउन पनि लगाउँछन् बेहुलीहरु । तर चीनमा एउटा यस्ता बिहे भयो जहाँ बेहुलाले बेहुलीले लगाउने गाउन लगाए भने बेहुलीले कोट पाइन्ट लगाइन् ।
बेहुला बेहुलीको त्यो साटफेर गरिएको पहिरनले सबै पाहुनालाई अचम्ममा पार्‍यो । आखिर किन त्यसरी साटफेर गरी विवाहका परिहन बेहुला बेहुलीले लगाए भन्नेमा आगन्तुकहरुमा निकै कौतुहलता छायो ।
यसरी उल्टो पहिरन लगाउने आइडिया बेहुलीको रहेछ । आफु मोटी भएको हुँदा आफुलाई बेहुलीले लगाउने गाउनले नसुहाउने उनको तर्क थियो ।
उता बेहुलाले चाहीँ बेहुलीप्रतिको माया दर्शाउने मौकाको रुपमा त्यसलाई लिए र बेहुलीको इच्छा मुताविक बेहुलीले लगाउने गाउन लगाएर बिहे गरे ।
सजायँ स्वरुप ती महिलाले लोग्नेलाई आफ्ना ब्रा र पेन्टी लगाइदिइन् । टाउकोमा स्यानिटरी प्याड टाँसिदिइन् अनि घुँडा टेकेर बस्न लगाइन् । अनि लोग्नेलाई क्यामराको अगाडि आफ्नो गल्तीका लागि माफी माग्न लगाइन् ।
लोग्नेलाई यस्तो पहिरन तथा आसनमा राखेर पत्नीचाहीँ ओछ्यानमा बसेर लोग्नेको मोबाइल चेकजाँच समेत गरिन् । यसो गरिरहँदाको भिडियो समेत खिचेर त्यसलाई इन्टरनेटमा अपलोड गरेपछि त्यो निकै नै लोकप्रिय बनेको छ ।
भिडियोमा गुलाबी रंगका ब्रा र पेन्टी लगाएर बसेका पुरुषले माफी माग्दै भनेका छन् मैले गल्ती गरेँ, अब यस्तो कहिल्यै गर्दिन । अबदेखि कुनै अरु महिलासँग कुरा पनि गर्दिन ।
कुनै गाउँ तथा सहरमा सबै मानिस धनाढ्य हुँदैनन् । कोही धनी तथा कोही गरीब हुन्छन्, स्वभाविक रुपमा । तर चीनमा यस्तो गाउँ छ जहाँका सबै मानिस लखपति छन् । तर गाउँ छाड्दा बित्तिकै उनीहरु कंगाल बन्दछन् ।
पूर्वी चीनको जिगांशू प्रान्तस्थित हुक्सी गाउँको कथा हो यो । यो गाउँमा कोहीपनि मान्छे गरीब छैन । किनकी गाउँमा बस्नका लागि धेरै शर्तहरुको पालना गर्नुपर्दछ । यहाँ हरेक व्यक्तिको वार्षिक आम्दानी झण्डै डेढ लाख रुपैयाँ जति हुनैपर्छ र हरेक परिवारको डेढ करोडको हाराहारीमा बैक ब्यालेन्स । सबै गाउँलेहरुलाई सरकारले नै गाडी तथा घर उपलब्ध गराएको छ । तर यदि यहाँ बसोबास गर्ने कोही मानिस गाउँ छाडेर बसाइ सर्न चाह्यो भने आफ्नो सबै धनसम्पत्ति छाडेर खाली हात जानुपर्छ । अर्थात् लखपति मान्छे कंगाल भएर गाउँ छाड्नुपर्छ ।
सन् १९६१ म पत्ता लागेको यो गाउँमा कैयन् गगनचुम्बी भवन, कम्पनी, होटल जस्ता तमाम संरचना छन् । गाउँमा केही चिजको पनि कमी छैन । सामाजिक नियम कानून पनि कडा छ । सन् २००३ मा आर्थिक वृद्धिसँगै यो गाउँ पूरै चीनमा चर्चाको विषय बनेको थियो ।
हेरौँ सबै जनता लखपति रहेको हुक्सी गाउँका केही तस्वीर
एजेन्सी । बेलायतमा एक बालिकाले आफू जिवित छँदै अदालतमा हालेको अनौठौ मुद्दा मरेपछि जितेकी छिन् । असाधारण क्यान्सर पीडित १४ बर्षीया बालिकाले आफ्नो मृत्यु पछि लासलाई फ्रिज गरेर राखिदिन माग गरेकी थिइन् ।
उनकी आमा उनको अन्तिम इच्छाको समर्थनमा थिइन् भने बाबु त्यसको बिपक्षमा । त्यसैले उनले अदालतमा मुद्दा हालिन र कानुनी लडाइँ जितिन् । उनको गएको अक्टोबरमै मृत्यु भइसकेको बीबीसीले जनाएको छ । अदालतले उनको लासबारे अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार उनको आमालाई नै दिएको हो ।
फैसलापछि उनको लासलाई फ्रिज गर्न अमेरिका लगिएको छ । यसरी लासलाई फ्रिजिङ गरेर राख्नुलाई क्रायोनिक भनिन्छ । यस प्रक्रियामा लासलाई शून्य देखि माइनस १ सय ३० डिग्री तापक्रममा राखिन्छ जसले गर्दा मस्तिष्क सुरक्षित राख्न सहयोग पुग्छ । यसमा पुरै शरीरलाई फ्रिज गरिएको हुन्छ ता कि लामो समयमा रोग निको भइसकेपछि मान्छे बाँच्न सक्ने संभावना रहन्छ ।
मर्ने बेलामा ति बालिकाले आफ्नो मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशलाई चिठ्ठी लेखेर आफू लामो समय सम्म बाँच्न चाहेको भन्दै भनेकी थिइन्, ‘म जमिनमा गाडिन चाहन्न ।’ न्यायाधीश पीटर ज्याक्सन उनलाई अस्पतालमा भेट्न जाँदा उनले यो चिठ्ठी दिएकी थिइन् ।
चिठ्ठीमा उनले भनेकी थिइन्, म भर्खर १४ बर्षको भएँ, म मर्न चाहन्न, तर म मर्ने वाला छु, तैपनि म लामो समय जिउन चाहन्छु, जुन क्रायोनिक्स प्रक्रियाबाट मात्रै संभव छ । उनले आफूलाई लागेको क्यान्सर भविष्यमा ठिक हुने र पुनर्जीवन पाउने आशा चिठ्ठीमा लेखेकी छिन् । जानकार हरुका अनुसार यदि सबै उपचार सफल भएमा उनले पुनर्जीवन पाउन दुई सय वर्ष लाग्न सक्छ ।
न्यायाधीस पीटरले आफ्नो फैसलामा भनेका छन्, क्रायोनिक्स सही हो या गलत यो फरक विषय हो तर आमा र बाबु बीच छोरीको लासलाई के गर्ने भन्ने विषय चाहिँ महत्वपूर्ण मानेर फैसला गरिएको हो । उनले यस्तो प्रकृतिको मुद्दा विश्वकै पहिलो भएको हुन सक्ने पनि बताएका छन् ।
के हो क्रायोनिक्स ?
क्रायोनिक्स एक विवादित प्रक्रिया हो । अहिले मानिसहरुलाई यो विषयमा धेरै जानकारी छैन । यसमा लासलाई फ्रिज गरेर राखिन्छ र फेरि जीवीत हुन सक्ने संभावान रहन्छ । यो सुविधा अमेरिका र रुसमा मात्रै छ । जहाँ लासलाई नाइट्रोजनमा धेरै कम तापक्रममा सुरक्षित राखिन्छ । यो प्रक्रियाका लागि ३० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको बीबीसीले जनाएको छ ।
समुद्रमा आउने सुनामीको बारेमा सुनिएकै हो, जुन निकै भयानक हुन्छ र धनजनको क्षति गर्दछ । तर समद्रमा सुनामी आउँदा पानीको छाल उर्लिएझैँ जब कहीँ बियरको सुनामी आउँछ तब स्थिति के होला ? साँच्ची पियक्कडहरुलाई त मालामाल होला, किनकी बियरको छालमा लहरिँदै सोमरस पान गर्न पाइने ।
इो दुर्घटना यति भयंकर थियो की दुर्घटनाबाट बौरिन लण्डनलाई कैयन् महिला लाग्यो । एजेन्सी